by Anuj Bhai January 19, 2021
केही दिन यता कन्टेन्ट राइटिङबारे धेरै जनाले सोधि रहनु भएको छ ।
कन्टेन्ट राइटिङ के हो ? कन्टेन्ट राइटिङ कसरी गर्ने ? यस्तै यस्तै म्यासेजले मेरो इनबक्स भरिएका छन् । इन्टरनेटमा काम गरि रहेको एक मजदुरको लागि यो भन्दा ठूलो सफलता अरु के हुन सक्ला ! मैले गर्न चाहेको पनि त यही थियो ।
धेरैले भन्ने गरेको सुनिन्छ । लेखेर बाँच्न सकिन्न । लेखनमा करिअर छैन । बरु, विदेशमा पलायन नै हुन किन नपरोस् । हाम्रो परिवारले लेखनमा स्वतन्त्र छोड्न सक्दैन । यसको पछि हामी बाँचेको समाजको पनि उत्तिकै हात छ ।
खैर, करिअर जुनसुकै विधामा पनि छ । त्यसमा लगाव हुनु जरुरी छ । म त भन्छु, लेख्न रुचि भएका र लेख्न जान्नेहरुको जति ठूलो करिअरु त अरु कसैको पनि छैन । स–स्यानो विषयलाई पनि कलात्मक तरिकाले लेख्दा कस्तो मिठो सुनिन्छ । राम्रो लेखनले तपाईँलाई छुन्छ ।
म तपाईँहरुलाई यति भन्छु, तपाईँहरु मध्ये कतिले पेन्डामिककै कारण रोजगारी गुमाउनु भएको छ । रोजगारीमै हुनु भएकाहरु पनि पक्कै सन्तुष्ट हुनुहुन्न । १० टु ४ आवर्स तपाईँहरु समयको साङ्लोमा बाँधिन पक्कै तयार हुनुहुन्न ।
यो बेलामा ठुला कम्पनीहरु आफ्नो व्यवसाय प्रमोट गर्न नपाएर निराशामा छन् । आफ्नो कम्पनीको प्रचार कसरी गर्ने ? आफ्नो प्रडक्टको प्रचार कसरी गर्ने ? आफ्नो सेल्स कसरी ग्रो गर्ने ? आफ्नो प्रडक्टलाई धेरै भन्दा धेरै जना माँझ कसरी पुर्याउने । तरिकाहरु जानि रहेको हुँदैनन् । त्यसकारणले गर्दा यो एउटा मौका छ कि तपाईँलाई कुनै पनि कम्पनीको प्रचार गर्न, तपाईँलाई राम्रो कन्टेन्ट लेख्न सक्ने तपाईँसँग आइडिया छ । राम्रो कन्टेन्ट लेख्दिने । उनीहरको प्रडक्टको बारेमा लेख्दिने । कम्पनीको बारेमा लेख्ने । सेवाको बारेमा लेख्ने । उनीहरुको कम्पनीको विशेष व्यक्ति र विशेष प्रडक्टको बारेमा लेख्ने । जुन लेखनले कम्पनीको प्रचार सहज तरिकाले हुन सक्छ । यो अवस्थामा स्क्रिप्ट राइटर कन्टेन्ट राइटरको निकै ठूलो भुमिका हुन सक्छ ।
कन्टेन्ट राइटरले फेसबुका होस् । अथवा ब्लगमा होस् । अथवा ट्विटरमा होस् । अथवा युट्युब भिडियो मार्फत होस् । विभिन्न तवरले उसले युटिलाइज गर्न सक्छ । कन्टेन्ट राइटिङ सम्बन्धि तपाईँलाई जानकारी छ भने तपाईँले त्यसलाई सुरुआत गर्नुस् । एउटा फेसन बुटिक सम्बन्धि कुनै कन्टेन्ट राइटर चाहिन्छ भने फेसन कोर्ष सँग सम्बन्धित बुटिक कोर्ष सँग सम्बन्धित कन्टेन्ट तपाईँले लेख्न सक्नु हुनेछ । रेष्टुरेण्टको बारेमा पनि तपाईँ लेख्न सक्नु हुनेछ । होटल, ट्रेकिङ कम्पनी, कुनै पनि कम्पनीको चाहे एउटा हस्पिटलको कुनै पनि सेवा, जसले विजनेश गरि रहेको छ । त्यो कम्पनीको तपाईँले कन्टेन्ट लेख्न सक्नु हुन्छ । त्यो कन्टेन्ट लेखेर तपाईँले राम्रो आम्दानी गर्न सक्नु हुन्छ । त्यसको बारे थोरै तपाईँसंग लेख्ने आइडियाबारे तपाईँलाई ज्ञान छैन भने तपाईँ सुरआतमा सिकेर पनि लेख्न सक्नु हुनेछ । यही कुरा सिक्न तपाईँ नजिकको इन्टिच्युटमा जान सक्नु हुन्छ । ट्रेनिङ सेन्टर पनि जान सक्नु हुन्छ । भलै त्यता नहुन पनि सक्छ । युट्युबमा पनि तपाईँले सर्च गर्न सक्नु हुनेछ । रिसर्च गर्न सक्नु हुनेछ । किनभने युट्युब एउटा ठूलो प्लाटफर्म हो । तपाईँ सिक्न सक्नु हुनेछ । जहाँ तपाईँ काम पनि गर्न सक्नु हुन्छ । तपाईँको दृढ इच्छा शक्ति हुनुपर्छ ।
अर्को कुरा तपाईँ यदी तपाईँ कन्टेन्ट राइटिङ सम्बन्धि सिक्न चाहनु हुन्छ भने अनुज भाइ डटकम प्लाटफर्ममा केही ट्रेनिङको व्यवस्था पनि गरेका छौं । विशेषत हामीले कन्टेन्ट राइटिङ सम्बन्धि ट्रेनिङको पनि व्यवस्था गरेका छौं । त्यो ट्रेनिङ हाम्रो अनलाइन हुने छ । त्यहाँ पनि तपाईँले कन्टेन्ट राइटिङ सम्बन्धि स्किलहरु सिक्न सक्नु हुनेछ ।
सुरुआतमा तपाईँले आफ्नो माइन्ड सेट तपाईँले तयार गर्नुस् । आफ्नो इच्छा, शक्ति तयार पार्नुस् । सुरु गर्नुस् र अघि बढ्नुस् । यत्ति भन्न चाहन्छु । बाँकी कुरा अर्को सेसनमा गरौंला । यो खालको मोटिभेसन अथवा व्यक्तिगत अभिव्यक्तिले तपाईँको जीवनमा कत्तिको फरक पार्छ, पार्देन थाहा छैन । तर, पनि म आफ्नो कुराहरु तपाईँहरु सामु सेयर गरि रहने छु । तपाईँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद । सुझाव सल्लाहको अपेक्षा सहित । हेर्दै गर्नु होला अनुज भाई डटकम…